Showing २६१-२७० of १,२०० items.
बीबीसी / कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका प्रारम्भिक लक्षण तथा साधारण रुघाखोकीका लक्षणहरू मिल्दाजुल्दा भएकाले कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने भन्ने कुराले सर्वसाधारणलाई अन्योलमा पारेको छ। केही सातायता देशका विभिन्न स्थानमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको बेला सर्वसाधारणलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण र रुघाखोकी छुट्याउन अप्ठ्यारो परेको देखिएको छ। तर घरबाहिर ननिस्केका तथा कोभिड(१९ पुष्टि भएको वा सम्भावित सङ्क्रमितको संसर्गमा नआएका व्यक्तिमा रुघा वा खोकी लागेमा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा घरमै उपचार गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। बाँके, पर्सा, उदयपुर, कपिलवस्तु, झापा र रौतहट जिल्लमा बढी प्रभावित भएका छन्।
कोरोनाभाइरसकै कारण मर्ने खतरा कति छ र हामी कतिसम्म डराउने ?
बीबीसी / कोरोनाभाइरसलाई अदृष्य ज्यानमाराका रूपमा अर्थ्याइँदैछ। त्यसभन्दा डरलाग्दो अरू के हुन्छ ररु एउटा घातक रोगाणु जसलाई हामी देख्न सक्दैनौँ र जब यो हामी भित्र छिर्छ हामीले यसको उपचार गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले कैयौँ मानिसहरू घर बाहिर निस्कन, जीवनका नियमित काम गर्न या बच्चालाई स्कूल पठाउन पनि डराइरहेका छन्। मानिसहरू सुरक्षित रहन चाहन्छन्। तर समस्या के हो भने हामी अब त्यति सुरक्षित छैनौँ। किनभने घातक परिणाम दिने भाइरस अहिले हामी वरिपरि घुमिरहेको छ। सन्तुलनको खोजीत्यसो भए अब के गर्ने तरु केहीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुन्जेल विभिन्न कुरामा लगाइएका रोक कायम हुनुपर्ने भन्छन्। तर त्यस्ता तर्कले प्
चराहरुको आफ्नै संसार
धरान । भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या लगातार बढिरहेको छ । कोभिड १९ इण्डिया डट ओआरजीका अनुसार हालसम्म १ लाख ३१ हजार १०३ जना कोरोनाबाट संक्रमित बनेका छन् । जसमध्ये ३ हजार ८६५ जनाको ज्यान गइसकेको छ । ५४ हजार २९८ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ६ हजार ३०९ जना कोरोना संक्रमित बन्दा १३९ जनाको ज्यान गएको छ । महाराष्ट्रमा ४७ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित बनिसकेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै २ हजार ६०८ जना नयाँ संक्रमित देखिएका छन् । ६० जनाको ज्यान गएको छ । अहिलेसम्म ४७ हजार १९० जना कोरोनाबाट संक्रमित बनेका छन् । एक हजार ५७७ जना कोरोनाबाट मृत्यु भइसकेको छ । दिल्ल
धरान । दक्षिण अमेरिका पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको ‘नयाँ इपिसेन्टर’ बनिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) ले जनाएको छ । हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी प्रभावित दक्षिण अमेरिकामा ब्राजिल रहेको छ । ब्राजिलमा हालसम्म २१ ह्जार ११६ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ३ लाख ३२ हजार ३८२ जना संक्रमित बनेका छन् । संक्रमितको हिसाले मृत्यु दर भने कम रहेको डब्ल्युएचओले जनाएको छ । त्यस्तै अफ्रिका क्षेत्रमा पनि एक लाखको हाराहारीमा संक्रमित भइसकेका छन् । अफ्रिकामा १४ साता अगाडि पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएको थियो । हालसम्म अफ्रिकाका सबैजसो मुलुकमा कोरोना संक्रमण फैलिसकेको शुक्रबार डब्ल्यु
धरान । भारतको बिहार राज्यस्थित सीतामडीमा बिहे भएर गएकी धरानकी एक महिलाको मृत्युको खबर माइतीपक्षलाई नदिई जलाएपछि मृत्युबारे शंका उत्पन्न भएको छ । धरान स्थायी घर भएकी रेखा दासको बिहीबार अपरान्ह ३ बजेतिर मृत्यु भए पनि नेपालमा रहेका माइतीपक्षलाई जानकारी नै नगराएको परिवारले जनाएको छ । धरानमा रहेका माइतीपक्षले छोरीको हत्या गरेको आरोप लगाएको छ । रेखाका भाइ राजु दासले दिदीको मृत्युबारे कसैलाई जानकारी नै नदिई जलाउनुले हत्यातर्फ संकेत गरेको बताए । ‘‘योभन्दा अगाडि पनि दिदीलाई मानसिक टर्चर दिँदै आइरहेका थिएँ’ उनले भने, ‘झाडा पखालाले मृत्यु भयो भनेर अहिले भन्छन्, तर हामीलाई विश्वा
धरान । बंगालको खाडीबाट सुरु भएको अम्फान आँधीका कारण भारत तथा बंगलादेशमा जनधन दुवैको क्षति पु¥याएको छ । साथै नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिएको छ । आँधीको प्रभाव धरानमा सम्म देखिएको छ । धरानमा तीन दिनदेखि सामान्य वर्षा र हुस्सु आइरहेको छ । आज यसको प्रभाव थप देखिएको छ । भारत र बंगलादेशमा भने करोडौंको क्षति पु¥याएको छ । बंगलादेशमा १२ जनाको ज्यान गएको छ भने ५५ हजार ६६७ वटा घरमा पूर्ण क्षति पु¥याएको छ भने आंशिक रूपमा १ लाख ६२ हजारमा घरधुरीलाई क्षति पु¥याएको बंगलादेशको मिडिया द डेलीस्टार डट नेटले जनाएको छ । डेल्लीस्टारका अनुसार १ लाख ४९ हजार हेक्टरमा लगाएको बाली पूर